Tower Installation Engineer Archives - Glory Assumption Space
Tower Installation Engineer
Tower Installation Engineer – Male (5 ) Posts
###### URGENT REQUIREMENT ###### မင်္ဂလာပါရှင့်။GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော ကမာရွတ်မြို့နယ်ရှိ Telecom Company ကြီးတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ပါဝန်ထမ်း အမြန်အလို ရှိသည်။ အင်တာဗျူးချက်ချင်းဝင်ရမည်။ 1. Tower Installation Engineer – Male (5 ) Posts / လစာ - ၃၅၀,၀၀၀ ကျပ် (အထက်) / ကမာရွတ်မြို့နယ် • ဘွဲ့ရ (သို့) ဆယ်တန်းအောင်မြင်ပြီးသူဖြစ်ရမည်။ • သက်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ (၁)နှစ်နှင့် အထက်ရှိရမည်။ • အမြင့်တွင် အလုပ်လုပ်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ • English စကားအနည်းငယ်ပြောတက်ရမည်။ • Project လိုအပ်ချက်အရ နယ်တွင်နေနိုင်ရမည်။ • လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံပေါ်မူတည်၍ လစာညှိနှိုင်းနိုင်သည်။ Responsibilities: - Implement installation for BTS, Microwave and power equipments of telecommunication network for all operators in Myanmar such as Mytel, MPT, Ooredoo or Telenor (according to projects) - Configure parameters to commissioning and making on air for BTS, Microwave links. Set up and test power system (Equipment of Huawei, ZTE, Erricson, Nokia …) - Implement site survey to collect information to make the design for installation BTS, MW and power for telecommunication network. Opportunities: - Work with biggest operators and vendors in Myanmar - Promoted to team leader, manager if you are good performance - Travel to many region of Myanmar or other countries မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်းထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သားစွာရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr5@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com Phone No – 09 263121101 , 09 262223785, 09 262223784 Viber Phone Number – 09 263121101 , 09262223784 , 09262223785 , ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင် ၊ မရမ်းကုန်း မြို့နယ် ။ ( ပြည်လမ်း ၊ ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့် နီးပါသည်။ )